[Wen She] Rich and Willful River View Garden Villa (Ungadubuli egumbini lomshado)
Dandong, Liaoning, i-China
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-温
U-温 unokuphawula okungu-24 kwezinye izindawo.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-温 izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
*I-Xiaoshe itholakala e-Dandong Huanchuang Tourist Area, ezungezwe izindawo eziningi zokubuka nezindawo zokudlala. Iqhele ngamamitha angu-50 ukusuka emfuleni i-Yalu, futhi ungaba nombono we-panoramic womfula kusukela ekamelweni.Ungahamba uye endaweni yokudlala eseceleni komfula kanye ne-water carnival cishe imizuzu emi-3. Kuthatha cishe imizuzu eyi-10 ukufika eFerris Wheel Plaza.
* Isitayela sobufundisi sesitayela saseYurophu, umugqa wokuqala wokubuka umfula, izingadi eziphindwe kabili ngaphambili nangemuva, amasimu akabili, amaphasishi e-skyscape asendlini, ingadi yesango ifakwe izihlalo ezinyakaziswayo, amalambu okuhlobisa e-LED, nezingidi zeminyango ezihlakaniphile ze-Xiaomi.
*Isitezi sokuqala: ingadi eshoniwe, usofa oyimodeli yesitayela saseYurophu, i-crystal chandelier, umshini wokuwasha, i-TV, iphasishi le-skyscape elisendlini, umbhede wesitayela saseYurophu, igumbi lokugezela elizimele.
*Isitezi sesibili: Idizayini ye-zenith yesitayela saseYurophu, amakhanyisa ekristalu, indawo yomlilo, udonga lwe-Philips echo, usofa oyimodyuli wesitayela saseYurophu, igumbi lokudlela lama-French, kanye negumbi lokugezela elizimele.
*Izitezi ezintathu: Igumbi lokulala elincane lasemaphandleni, ithala lesitayela saseYurophu, i-TV, igumbi lokugezela elizimele.
*Isitezi sesine: Igumbi lokulala elikhulu elibuka umfula, ithala elibuka umfula, amakhanyisa acwebezelayo, amadeski ezinkuni aqinile, igumbi lezingubo, ithala elivulekile, ubhavu wesitayela saseYurophu, igumbi lokugeza elizimele.
*Isitezi ngasinye sifakwe imikhiqizo yokugeza ekhethwe ngokucophelela, futhi amagumbi ezivakashi ahlotshiswe ngokunethezeka ukuze akhe ikhwalithi ephezulu.
I-Xiaoshe ihlinzeka ngezinsizakalo ezinjengokudlulisa imoto okukhethekile, ukudluliswa kwemithwalo, izoso zangaphandle zokuzisiza, ukuqasha amabhayisikili okubuka indawo, nokuthenga amathikithi ashibhile ezindaweni ezinhle! Ukunethezeka okuphezulu kokubusa okuphezulu, indawo yokuhlala enhle, ukuphepha kwamahora angama-24, izindawo zokupaka ezanele.
Kuqhele ngamamitha angama-30 ukusuka emfuleni, kunezindawo zokudlala, amapaki amanzi, amasondo amakhulu e-ferris, i-Beacon Hill Park, i-New Port Bridge, izinkantolo ze-basketball, izindawo ze-villa, njll., kuyisinqumo sakho esingcono kakhulu kumphathi ~!
I-Xiaoshe ihlinzeka ngezinsizakalo ezinjengokudlulisa imoto okukhethekile, ukudluliswa kwemithwalo, izoso zangaphandle zokuzisiza, ukuqasha amabhayisikili okubuka indawo, nokutheng…
U温 Ungumbungazi ovelele